आइतबार बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य, तोलामा कति ? | News Polar
आइतबार बढ्यो सुनचाँदीको मुल्य, तोलामा कति ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले बढेको छ । छापावाल सुन साताको अन्तिम दिन शुक्रबार प्रतितोला रु ८९ हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८९ हजार ८०० तोकिएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८९ हजार ३५० कायम गरिएको छ जुन शुक्रबार प्रतितोला रु ८९ हजार १५० मा कारोबार भएको थियो ।
महासङ्घका अनुसार चाँदीको मूल्य शुक्रको तुलनामा आज प्रतितोला रु २० ले बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला रु एक हजार १४० मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार १६० तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन चाँदी कारोबार मूल्यका आधारमा नेपालमा महासङ्घले सुन तथा चाँदीको मूल्य तोक्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यतिखेर सुन प्रतिऔँस एक हजार ७३२ दशमलव ७२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८, १०:५३:३४